Waxaa la cusbooneysiiyay liistada nooca gogosha baabuurta ee 'TPE' bishii Maarso 2021
Waxaan Shaoxing Huawo Auto Qaybo Co., Ltd wuxuu ku takhasusay soo saarida dermaha baabuurta. Waxaan cusbooneysiin karnaa moodooyinka darbiyada gawaarida sida ugu dhaqsaha badan. Haddii moodooyinka gawaarida ee aad u baahan tahay aysan ku darin liistadeena moodeelka, fadlan hal mar nala soo xiriir, oo si dhakhso leh ayaan u dhammayn karnaa, sidoo kale soo dhawow haddii aad leedahay leysarka 3D ...
Markaan u baahanahay inaan soo iibsanno sagxadaha gaariga, sidee loo helaa soo saaraha ugu fiican Waxaad ka raadin kartaa Google "warshadda carrada gawaarida", ka dib waxaad ka heli kartaa degello badan, waxaadna u baahan tahay inaad xukuntid taas oo ah warshadda salliga gawaarida aad u baahan tahay, iyo inaad iska hubiso waxyaabaha salliga gawaarida ay tahay waxaad u baahan tahay. Waxaa jira saaxiib naxariis badan ...
Agabyo kala duwan iyo dhismooyin derbiyada sagxada gaariga ayaa leh qaabab dhaqid kala duwan. Adkaanta maydhashada sidoo kale way ka duwan tahay, gogosha baabuurta hada caadi ahaan waxay la socdaan qalabkan kala duwan: rooga, gogosha gawaarida caagga ah, gogosha baabuurta ee pvc iyo gogosha baabuurta ee TPE / TPR. Aynu sharaxno waxa ku kala duwan washinka ...
Sidee loo isticmaalaa gogosha sagxada gaarigaaga muddo 20 sano ah?
Markaad hooyo noqotid, waxaad runtii mashquul ku noqon kartaa maalin kasta si aad u hubiso in qof walba oo qoyska ka tirsan si wanaagsan loo daryeelo. Ma lihid wakhti aad ku nadiifiso qolka, sidoo kale waqti uma haysatid inaad ku nadiifiso gaarigaaga. Waqtigu macnaheedu waa wax walba, xitaa ma sugi kartid daqiiqad, waxaad u baahan tahay inaad hesho hab aad naftaada ku nasato. Ho ...
Sidee Loogu Xulaa Gawaarida Gaarigaaga?
Markii aad iibsaneysid Baabuur cusub, waxaad ubaahantahay inaad soo iibsato dermaha gawaarida hal mar.We Huawo auto parts Co., Ltd waxay bixisaa noocyo badan oo gogol gawaari ah iyo gogosha santuuqa si loo ilaaliyo gaarigaaga dhexdiisa. adiga. Gogosha gawaarida kee ku habboon gaadhigayga? Markaad booqato annaga ...
Immisa nooc oo gawaari ah ayaan haynaa?
Huawo Auto Parts Co., Ltd waa warshad gogosha baabuurta ee TPE oo soo saartay wasakhdo badan oo loogu talagalay dermaha gawaarida iyo gogosha jirridda. Waxaan leenahay gawaarida gawaarida iyo caaryada gogosha ee Toyota, Honda, Land Rover, BMW, Jeep, Porsche, Mercedes-Benz, Chevrolet, Cadillac, Ford, Nissan, Lexus, Audi, Das Auto, Volvo, Jaguar, KIA, Mazda, Tesla , Mitsubishi Motors, Bui ...
Waa maxay sababta qalabka TPE uu ugu adeegsan karo Warshadaha baabuurta
Laga soo bilaabo kuraasta hore ee gawaarida iyo gawaarida casriga ah, qalabka socodka dadka ayaa soo fiicnaanayay. Si aad ugu raaxeysato, warshadda gawaarida gawaarida ee TPE ayaa soo saartay derbiyada gawaarida TPE oo ka muuqday muuqaalka dadweynaha. Elastomer Thermoplastic elastomer wuxuu ka samaysan yahay walxo saldhig SEBE oo lagu qaso saliid cad iyo oth ...
Qalabka TPE gawaarida gawaarida: maxay yihiin faa'iidooyinka maaddada gawaarida ee TPE?
TPE dhab ahaantii waa nooc cusub oo alaab ceyriin ah oo leh dabacsanaan sare iyo xoog isku-ururin. Marka la eego ductility ee wax soo saarka iyo farsamaynta qalabka TPE ayaa la soo saari karaa si loo sameeyo muuqaal ka duwan. Hadda, derinnada dabaqa TPE waxay mar hore noqdeen mid ka mid ah alaabta ceeriin ee ugu weyn dhinaca wax soo saarka iyo ...
Gogosha baabuurta noocee ah ayey u xiiseeyaan dadka xiisaynaya inay dalka ka gudbaan!
Gogosha baabuurtu waa lama huraan inta badan baabuur wadista maalin kasta, gudaha dalka gudihiisa sidoo kale waxay qaadaan mas'uuliyadda ka-hortagga iyo ilaalinta jirka gaariga, laakiin gogosha baabuur-dhaqameedka caadiga ah saamaynta biyuhu waa mid guud, ma qaadi karaan biyaha dhoobada ah markay waddanka gudbayaan. Isla mar ahaantaana, dabacsanaanta ayaa liidata, unde ...
Gogosha baabuurta ee 'TPE' waa isbeddellada mustaqbalka
Gogosha dabaqa gawaarida waa yaqaanaan milkiile kasta ， iyadoo aan loo eegin inay ka timid dukaanka baabuurta ee 4S hadiyad ahaan, ama is iibsada, gogosha baabuurtu waa gudaha ugu horreeya ee baabuur aad u baahan tahay. Sida ururinta biyuhu, sunta ka hortagga, siibashada, gawaarida ilaalinta mid ka mid ah sagxada gaariga, suuqa baabuurta ...
Si dhow ugu dhow taabashada dhulka maalin kasta, sida loo nadiifiyo xarunta baabuurta?
Baabuurku wuxuu ku billowday qalab socod, markaa wuxuu socdaa meel ka baxsan maalin walba, waxaa jira deegaanno badan oo dhulka ah, meelaha qaarkood waxay leeyihiin dhoobo badan ama siigo badan, aad ayey wasakh u yihiin, sidaa darteed xarunta gaariga waa mid wasakh badan, ma istaagi karno waxaa, ka dibna sida loo nadiifiyo xarunta baabuurta? Ha Shaoxing Huawo Auto Parts Co ....
Sidee loo doortaa dhumucda gogosha sagxadda gaariga?
Hada ku dhowaad dhammaan qoysku waxay leeyihiin gaari, milkiile kasta oo baabuurna wuu jecel yahay gaarigiisa. Si loo ilaaliyo nadaafadda gaariga, waxay iibsan doonaan dhammaan noocyada qalabka baabuurta, gogosha lugta baabuurka waa lagama maarmaan, laakiin dhumucda sagxada gaariga ayaa sidoo kale ah kala duwan, markaa dhumucdee ayaa ku habboon? Gogol dhaafka gawaarida ayaa ku kala duwan ...
Waxaa la cusbooneysiiyay liistada nooca gawaarida TPE ee Maarso ...